Umgaqo-nkqubo weekuki ›Ibhlog de Juan Herranz
Ngokuthobela imimiselo yenqaku le-22.2 yoMthetho 34/2002, kaJulayi 11, kwiiNkonzo zoMbutho woLwazi kunye noRhwebo lwe-Electronic, uMninikazi ukwazisa ukuba le webhusayithi isebenzisa ii-cookies, kunye nomgaqo-nkqubo wokuqokelela kunye nokuphathwa kwazo. .
2. Ziintoni iikuki?
Icookie yifayile encinci elula ethunyelwa kunye namaphepha ale webhusayithi kwaye isikhangeli sakho Icookie yifayile ekhutshelwa kwikhompyuter yakho xa ufaka amaphepha athile ewebhu. Iikuki zivumela iphepha lewebhu, phakathi kwezinye izinto, ukugcina nokubuyisela ulwazi malunga nemikhwa yakho yokukhangela kwaye, kuxhomekeke kulwazi oluquletheyo kunye nendlela osebenzisa ngayo izixhobo zakho, zingasetyenziselwa ukukuchonga.
3. Iintlobo zeekuki ezisetyenzisiweyo
Indawo ethi www.juanherranz.com isebenzisa ezi ntlobo zilandelayo zeekuki:
Iikuki zohlalutyo: Zizo ezo, ziphathwe kakuhle yiwebhusayithi okanye ngabantu besithathu, zivumela inani labasebenzisi ukuba libalwe kwaye ngenxa yoko lenze umlinganiso wamanani kunye nohlalutyo losetyenziso olwenziwe ngabasebenzisi bewebhusayithi. Ngenxa yoku, ukukhangela okwenziwa kule webhusayithi kuhlalutywe ukuze kuyiphucule.
Ii-cookies zomntu wesithathu: Le webhusayithi isebenzisa iinkonzo ze-Google Adsense ezinokufaka iikuki ezisebenzela iinjongo zentengiso.
4.Ukuqalisa, ukucima kunye nokususa ii-cookies
Ungamkela, uvale okanye ucime iikuki ezifakwe kwikhompyuter yakho ngokuqwalasela iinketho zebrawuza yakho. Kumakhonkco alandelayo uya kufumana imiyalelo yokwenza okanye ukuvala iikuki kwiibhrawuza eziqhelekileyo.
Google Chrome: LAPHA
5. Isilumkiso malunga nokucima iikuki
Ungacima kwaye uvale iikuki kule webhusayithi, kodwa inxalenye yesayithi ayiyi kusebenza kakuhle okanye umgangatho wayo unokuchaphazeleka.
Ngemibuzo kunye / okanye izimvo malunga nomgaqo-nkqubo wecookie, nceda uqhagamshelane nathi: